Shirkadda Hass petroleum Oo Shidaal Wasakhaysan Dalka Keentay Iyo Gaadiid Badan Oo Waxyeelo Kasoo Gaadhay • Oodweynenews.com Oodweyne News
Shirkadda Hass petroleum Oo Shidaal Wasakhaysan Dalka Keentay Iyo Gaadiid Badan Oo Waxyeelo Kasoo Gaadhay
Iyadoo dhawaanahay ay gaadiid layday kala duwan ee Somaliland ka cabanayeen shidaal wasakhaysan oo dalka soo galay,kaasi oo wax yeelo kal duwan ay kasoo gaadhay gaadiidka qaarkood, ayaa hadda waxa la sheegay in shidaalkaa wasakhsan ay dalka keenya shirkda HASSPERTROLEUM lagu magacaabo, taasi oo kamid ah shirkada shidaalka keena dalka.
Qaar kamid ah gaadiid layda oo la haddlay war-baahinta, ayaa sheegay inay Kaalmaha wasakhaysan ay kaga shubteen baabuurtooda ka hor inta aanay ogaan inuu shidaalku wasakhaysan yahay ay ahayeen kaalmo ay ku xardhantahay magaca shirkada HASSPETROLEUM.
Geesta kalena xoggo kala duwan, ayaa warbaahinta Yool u sheegay in shidaalkaa wasakhaysan ay dalka keentay shirkada shirkada lagu magacaabo Hasspetroleum.
Waxa kale oo xogguhu ay intaas ku dareen in shidaalkaa wasakhaysan ee ay shirkada Hasspetroleum keentay ay wax yeelo kasoo gaadhay baabuur tiro badan, kuwaas oo hadda ku jira geerashyada Magaalooyinka Hargeysa, Burco, Berbera iyo Magaalooyinka kale ee dalka.waxaana la xaqiijiyey in ay wax yeelo kala duwan kasoo gaadhay shidaalkaa wasakhaysan.
Docda kalene Khubaradan baabuurta ayaa iga digay gaadiid layda inay ku shubaan baabuurtooda shidaalkaa wasakhaysan oo ay sheegeen inuu waxyeelo aan la maarayn karin gaadhsiinayo injiimadda baabuurta.
Si kastaba ha-ahaatee shidaalka wasakhaysan ee dalka soo galay ayaa waxa keentay shirkada lagu magacaabo Hasspetroleum.